Ibhali encinci eBomvu - I-Airbnb
Ibhali encinci eBomvu
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTom And Bonnie
UTom And Bonnie yi-Superhost
Wamkelekile kwi-Red Barn yethu encinci!
Hayi kancinci, uvimba wethu we-1840 utshintshwe waba yindlu yeendwendwe epheleleyo.
Indawo yonke yeyakho!
Sihlala ngaphaya kwendlela yokungena kwindlu enkulu ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Ekuphela kwento esabelana ngayo yindawo yokupaka kwaye inkulu kakhulu.
Singakwazi ukwamkela abantu ukuya kutsho kwabayi-4 ibe njengokuba isetiwe ngoku, nonke niza kwabelana ngezinto eziyimfuneko kwigumbi lokulala elinye elikhulu, nangona besikhe saneendwendwe kwixesha elidlulileyo sizihambise ezantsi.
Umgangatho wokuqala unekhitshi elipheleleyo elinendawo yokutyela... izixhobo zetafile, izixhobo, iimbiza kunye neepani, i-microwave, ikofu ye-Keurig K cup kunye nezimuncumuncu.
Kwabo bathanda ukupheka siye sathenga isitovu esitsha esihle segesi esipheleleyo esinegridi!
Igumbi lokuhlamba iimpahla alikho ekhitshini njengoko kukho igumbi elikhulu lokuzilolonga/lokusebenzela elinedesika, iintsimbi ezisimahla, iimethi ze-yoga, iibhola zokujima njl.
QAPHELA UKUBA ZONKE IZIXHOBO ZISETYENZISWA EMNGCIPHEKWENI WAKHO.
Asinaxanduva lwako nakuphi na ukwenzakala, ukulahlekelwa kobunzima, okanye iimvakalelo zempilo ebangelwe kukusebenzisa eli gumbi.
Umnyango ongasemva uvulela iveranda yabucala ukuze igungxule okanye iphole. Kukho i-Weber grill (enamalahle kunye nezinto zokugrilla) kunye nomngxuma womlilo. Ibhedi ekuthiwa yi-hammock yomqhaphu entle enwebe phakathi kweoveni ezimbini ezinkulu ekupheleni kwamahlathi.
Umgangatho wesibini yigumbi lokulala elinye elikhulu/indawo yokuhlala enesilingi ebugophe. Ibhedi enkulu, ibhedi emibini kunye nesofa zonke zingasetyenziselwa ukulala. Sineematrasi ezimbalwa zomoya ukuba oko kuyathandwa.
I-tv kunye neVerizon FiOS kunye NEWIFI iqukiwe, njengoko iyinkqubo yemidlalo ye-retro Atari (kubantu abancinci okanye abo bafuna ukuthembela ulutsha lwabo!).
Kwabo bafuna ukusebenzela ekhaya, uvimba une-WiFi yayo ekhethiweyo kunye nenkonzo ye-Verizon 5G. Isignali enamandla kakhulu naphi na kuvimba kunye nedesika kunye neetafile zokusebenza.
Igumbi lokuhlambela eline-shower eneemvula liphezulu nalapha.
Inqolobane iye yanyanzelisa ubushushu kunye ne-AC ephakathi.
Simalunga nemizuzu eyi-45 sihamba ngemoto okanye sihamba ngololiwe eMetro North eManhattan kwaye sihlala malunga neemayile eziyi-2 ukusuka kwisikhululo seCroton Harmon.
Indawo yethu ilungele nabani na osesixekweni ofuna ukuhamba kancinci aze abuke iDolophu yoMlambo, okanye njengendawo yokutyelela iCatskills okanye ukunyuka ngakumbi kwaye angajongani nabantu abahambahambayo ukuya nokubuya esixekweni. Sinohambo losuku olulula oluya kwi-Hunter Mountain nazo zonke ii-resort ze-ski, i-West Point, i-Dia Beacon kunye ne-Mohunk Mountain House ukuzitsho ezimbalwa!
Ndimele ndichaze ukuba mhlawumbi yimizuzu eyi-3 ukusuka kwi-Great Jack KaenLantern-Blaze!!
Kwakhona silungele nabani na osuka ngaphandle kwedolophu otyelela isixeko ukuya kumboniso, isidlo sangokuhlwa okanye umcimbi, kodwa akafuni ukuhlala esixekweni.
Ixesha lokufika ngu-2:00 ebusuku okanye ngelinye ixesha
Ixesha lokuphuma ngu-11:00 kusasa
Sibhetyebhetye kangangoko sinako ukuphinda sibe ngala maxesha.
Nceda usazise ukuba ungathanda ukuhlala kancinci kamva ukuze ufike ngaphambi kwexesha.
Kufuneka nje uqiniseke ukuba kukho ixesha lokuphuma nokucoca!
Siphila ngaphandle kwedolophu ngoko ukuba nemoto kungcono kakhulu. Kakade zininzi izindlu zamaplanga kunye ne-Uber.
Umbuki zindwendwe ngu- Tom And Bonnie
Kukho umntu odla ngokuba kufutshane nawe ukuba ufuna nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ossining